Yedu 2012 Super Bowl, Shanduro yechipiri! | Martech Zone
Kufambira mberi kunoenderera! Pat Coyle neni tanga tichishanda netarenda rakakura (Tim naCurtis) uko va neutsanzi pakusimudzira iyo webhusaiti yakatsaurirwa kubhidha ye2012 Super Bowl kuno kuIndipolis.
Super Bowl Committee iri kutungamirwa naMark Miles, Mutungamiri we Central Indiana Corporate Kubatana. Maka arikuita basa rakasarudzika kare, achitora zviri nyore matekinoroji ewebhu kuti azivise uye anyore rutsigiro renharaunda. Iyi 'vhezheni' yewebhusaiti inoratidza icho chinangwa - isu tave nezvinhu zvinotevera:
Mavhidhiyo ari maviri anoratidzwa mune mutambi uye achishandurwa kuti ashandiswe pa Youtube kuitira kuti tigone kuenda kuhutachiona! Ive neshuwa yekuratidza kwekuzvikudza kwako uye uratidze vhidhiyo pane yako blog!
Maka akatsaurirwa kutungamira mubhadharo pachena - saka isu tine komiti yekutora mabloggi ekupa nharaunda nhaurwa nezviri kuitwa nechikwata uye nemabatiro avanogona kuita. Compendium Software yakwira kumusoro kutsigira kufamba uye yakapa maakaunzi ekuvandudza mamiriro avo ehunyanzvi yemakambani blogging application!
Kukurukurirana kubva kwakatenderedza webhu kuri kutsvaga nekuratidzwa pane peji reimba kuti iwe ugone kujoina! Izvo zvakakosha kuti isu tipe nzira yekuti nharaunda ibatanidzewo mukukurukurirana, kunyangwe kana zvisina kunaka. Dare racho harina kungozvitsaurira chete pakuwana iyo Super Bowl, asi ivo vanoda kuti nharaunda dzibatanidze maitiro ekuti ive iyo yakanakisa Super Bowl.
Uchishandisa Yahoo! Mapaipi, ini ndakavaka chirongwa chakaomarara icho chinoburitsa uye chinosefa zvinyorwa zvechizvino kubva kunhau dzenzvimbo yedu nevatinobatana navo venhau pavanonyora nezve 2012 Superbowl. Izvi ndezvekuti isu tigone zvakare kupa inosvika kuminiti nhau uye kuratidza yemuno nhepfenyuro rutsigiro rwebhidhi futi!
ExactTarget auya zvakare kuzobatsira komiti uye ndokupa Akaundi uko kwatichange tichisundidzira News Alerts uye Newsletters kubva! Tiri kuzoshanda zvinotevera pakubatanidza mafidha uye bhurogu muemail tichishandisa ExactTarget's API
Zvese izvi mushure me8PM uye pakupera kwevhiki! Zvakaringana kunetesa mukomana kunze - asi uyu wakakosha mukana wekuti upfuure!
Tags: 2012 Super mbiyacoltsindianapolisindianapolis coltsindianapolis nyeredzipat coylenakisa mbiya
Kukadzi 26, 2008 na12: 26 PM
Kutarisa zvirinani kare. Usiku ihwohwo hwakabva kune 'basic info' saiti kuenda kune 'yekugara, kufema, nzvimbo yeyazvino info' saiti. Huru basa dood.
Kukadzi 26, 2008 na1: 51 PM